Marketing amin'ny finday: Tranonkala, fampiharana, kaody SMS & QR - Mahafinaritra sa ilaina?
Alarobia, Novambra 2, 2011 Alatsinainy Janoary 16, 2017 Chad Pollitt
Amin'ny 2015, ny finday Internet dia hahatratra ny fampiasana birao ary tamin'ny taona lasa dia nitombo avo roa heny ny fampiasana azy. Mihabetsaka ny mpanapa-kevitra mampiasa ny tranokala finday mba hidirana amin'ny fampahalalana ilainy mba hividianana safidy. Hatramin'ny 50% ny fotoana an-tserasera dia mety tsy ho azonao amin'ny tsy fananana sy fametrahana tetika finday ho an'ny orinasa na marika iray. Mandritra ny taona vitsy manaraka dia hitombo hatrany io isan-jato io. Ny fanontaniana dia - Moa ve nohatsaraina ho an'ny tranonkala finday ny tranonkalanao ary manararaotra ny finday ve ny varotra miditra anao?
Tamin'ny 27 Oktobra, John McTigue (EVP) ary Chad Pollitt (Dir. Of Social Media & Search Marketing) an'i Kuno Creative dia nanolotra ny "Marketing Inbound Mobile." Nasongadin'ny fampisehoana ny faritra efatra lehibe sy ny fijerena finday efatra:
1. Tranonkala finday
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny famolavolana tranokala finday
Fanamby amin'ny tranokala amin'ny finday
Famolavolana tranokala manan-tsaina
Asio tranokala finday mifanohitra amin'ny famolavolana tranonkala mahaliana
Votoatiny tsara indrindra ho an'ny tranonkala finday
2. Fampiharana finday
Tombontsoa sy fatiantoka ny fampiharana
Tranonkala finday mifanohitra amin'ny fampiharana
3. Hafatra SMS / hafatra
Statistika sy demografika
Ohatra amin'ny fampielezana SMS
Fitsangatsanganana an-tsokosoko amin'ny SMS
Ohatra amin'ny fampielezana kaody QR
Fitsangatsanganana an-tsehatra amin'ny kaody QR
Ho fanampin'izay, ny famelabelaran-kevitra dia nandinika ny haitao sy ny fitaovana izay ahafahana mampiorina amin'ny fomba matanjaka ny fampielezan-kevitra amin'ny finday rehefa miresaka ny fomba hampifangaroana tsara ny finday amin'ny fampielezana an-tserasera sy an-tserasera ankehitriny. Ny sasany amin'ireo fitaovana resahina dia misy Fisamborana an'i 44Doors, MoFuse ary HubSpot.
Ny varotra finday miditra dia tsy lafo vidy ho an'ny mpivarotra intsony. Miorina amin'ny statistika, ny fampiasana ary ny fironana dia takiana amin'ireo orinasa sy marika maniry hanatratra sy hifandray amin'ilay demografika kendreny izy ireo. Ireo izay misafidy ny tsy hanao izany dia mamela ny tenany ho marefo amin'ireo mpifaninana izay misafidy ny hampiasa ny herin'ny marketing anaty finday. Raha mila fanazavana fanampiny, aza misalasala mijery ny horonantsary feno an'ny fampisehoana marketing amin'ny finday.
Tags: Fivarotana finday sy tabletteFamoronana tranokala findayQR CodesSMS
Ny fiakaran'ny marketing anatiny